"Association of Network Catering Enterprises" yakaonekwa muRussia - "Potato System" Magazini
Dodo Pizza, Kicheni muRuwa, McDonald's, Subway naSodexo vakasaina gwaro rechinangwa chekuumba mubatanidzwa mutsva wemaindasitiri.
Vanotungamira vamiririri venzvimbo dzekudyira veruzhinji muRussia - Dodo Pizza, Kicheni iri kuRuwa, McDonald's, Subway neSodexo - vazivise kugadzirwa kweAssociation of Food Chain Makambani (ASPP). Sangano rinomiririra zvido zvemakambani enetiweki muindasitiri, chinangwa chayo ndechekutsigira kuenderera mberi kweindasitiri mune shanduko yekukurumidza uye kuwedzerwa kwevatengi kutarisiro inoitisa bhizinesi muzvinhu zvese zvekudya. Sangano idzva rinozova chikuva chekuchinjana ruzivo pakati pevatambi vemusika vane systemic uye ichange iri kuita mukuumbwa kwenzira dzakanakisa muindasitiri yezvikafu, pamwe nekuzadzikiswa kwemisimboti yekusimudzira kwakasimba. Shanduko idzi dzinobatsira kuzadzikisa danho repamusoro rebasa, mhando, chengetedzo uye, semhedzisiro, basa riri nani kumaRussia.
Pakati pezvirongwa zviri kuuya zvesangano pane kuumbwa kwebhuku rekushandisa pakuitwa kwehutsanana, kuvandudzwa kwenzvimbo dzezvematongerwo enyika mukupa chikafu cheveruzhinji, kuitwa kwemabasa edzidzo evashandi, vemafranchise uye vanotengesa.
Uye zvakare, iyo APP inotarisira kutora chinhanho mukuumbwa kwemitemo mitsva yebhizinesi, yakanangana nekuchengetedza nharaunda, kunyanya, mukati mehurongwa hwetsika yekuwedzeredzwa mutoro wemugadziri.
Natalya Ivanova, nhengo yePublic Council iri pasi pe Ministry of Agriculture yeRussia, pamwe neAdvisory Committee yeTechnical Regulation uye Standardization yeEurasian Economic Commission, ichave General Director weSangano.
“Isu kuDodo tinofara kubatana nevamwe vedu. Parizvino, munguva dzekutambudzika, izvi zvinonyanya kukosha. Nekugovana zviitiko uye zvakanakisa maitiro, pamwe chete tinogona kugadzira yakatonyanya kukosha kune vatengi vedu, vashandi, vanotengesa uye iyo indasitiri izere. Tichabatikana mukuita basa resangano, dzidzai kune vamwe uye tiunze hunyanzvi hwedu, "akadaro Ivan Tikhov, Managing Director weDodo Pizza muEurasia.
"Kambani yedu" Kicheni muDunhu "kwemakore matatu yakura kuita chirongwa chakasiyana nehunhu hwayo. Isu tinogadzirira mazana eakasiyana madhishi uye tinogadziridza menyu svondo rega rega, kuendesa nekuvaka maitiro akaomarara kutenderedza chikafu chakareruka. Zvese izvi zvinoitwa kuitira kuti vanhu veguta vagamuchire iwo akanyanya kunaka mune izvo zvekudya, izvo mune yekudyira yeruzhinji itsika isingavimbe zvachose. Aya mabhureki emangwanani, masikati uye kudya kwemanheru. Chikafu chakagadzirwa. Sezvo isu takura kusvika kumavhoriyamu emakambani akura kwazvo uye mazana ezviuru zvevatengi anovimba nesu mazuva ese, zvichave zvakakosha kwatiri kuti tigovane ruzivo rwedu nevatinoshanda navo muchitoro. Tave takabatana, isu tichaedza kushandura pfungwa yekuendesa kune zvirinani uye kuita kuti zvigadzirwa zvedu zvese zvive nani chete ", - anodaro Anton Lozin, co-muvambi we" Kicheni paRuwa ".
“Indasitiri yedu iri kusimukira zvine mutsindo, miganhu iri pakati pezvikamu, maresitorendi echinyakare nenzvimbo dzekutengesa chikafu, mabhizinesi anotarisa mukuendesa, kupa zvekudya nezvimwe zvakadaro zvishoma nezvishoma. Izvozvi zvakakosha kwazvo kuti vamiriri vemusika pachavo vatore danho uye vape mamiriro ekukura nemakwikwi, nepo zvichibva pahunhu hwemhando yepamusoro, hunhu, kujekesa, kuvhurika nekusimudzira kwakasimba. McDonald's yakagadzirira kugovana zvayakanakisa maitiro, zviyero uye nzira nevatori vechikamu mumusika muchikamu ichi chitsva, "anodaro Mark Karena, CEO weMcDonald's Russia.
"Musiyano mukuru webhizimusi reS Subway inharaunda yakasimba yevatengesi, iyo parizvino inosanganisira vezvemabhizimusi mazana maviri nemakumi mashanu. Isu tiri kambani yekutengesa mune yayo yepasirose pfungwa. Isu tarisiro yedu huru kukura kwe network, vatsva vekutangisa-vanamuzvinabhizimusi vari kugara vachijoinha nesu. Naizvozvo, isu tine basa rakakura rekusimudzira chikamu chidiki chebhizinesi. Kazhinji kune mafranchisees matsva, kutenga iyo Subway restaurant ndiyo yekutanga bhizimusi rakazvimirira. Uye isu tinova nechokwadi chekuti iri kubudirira uye inounza mari yakagadzikana. Iyo kambani haingotengesi franchise, isu tinotsigira vanamuzvinabhizimusi pamatanho ese ekuumbwa nekusimudzira kwebhizinesi ravo. Subway ikambani inoona nezvemagariro evanhu, uye, pamusoro pekutsigira iyo franchisee, zvakakoshawo kwatiri mumamiriro ezvinhu anoita vashandi Isu tinopa mabasa kuburikidza nekuvhura franchise network, chitima uye kukurudzira vashandi veresitorendi, "anodaro Olga Bludovskaya, Mutungamiri weSubway Russia. “Zvakakosha kuti isu titore chikamu mukuumbwa kwezvirongwa, kuve pamberi pezvinhu zvitsva zvine chekuita nechikamu cheQSR uye nemabhizimusi madiki. "Tinotarisira kuti nekuchinjana ruzivo nevamwe vatinoshanda navo, pamwe chete tichakwanisa kuunza shanduko yepamusoro kuindasitiri."
“Nhasi, makambani makuru emaindasitiri ane huwandu hwevashandi vanosvika zviuru makumi matatu kusvika makumi mana, vanonyatsosarudza vavanoshanda navo pakuronga zvekudya zveveruzhinji, nekuti iyi haisi tsika yemakambani chete - hunhu hwehupenyu hwemushandi wega wega, pamwe nemugari nyika yedu. Ndosaka zvichikosha kwazvo kwatiri, sevamiriri vakakosha vechikamu chezvekudyidzana, kuti indasitiri inovandudza nekushandura ichitungamirwa nematanho epamusoro nezvinodiwa nevatungamiriri vemaindasitiri, avo vane zviyero zvemumagariro maererano nekugona kwehupfumi, "akadaro Andrey. Zhavoronkov, Mutungamiri uye CEO weSodexo Russia.
“Ndiri kufara kuve muchirongwa chinozobatsira kusimudzira indasitiri yezvikafu muRussia. Kutenda danho remakambani anomiririra chingangoita makumi matatu% ezvekudya kunze kwemusika wepamusha, isu tinoronga kuwedzera zvakanyanya mwero wekutsinhana kwemaitiro akanakisa, kuve "nzvimbo yekukwezva" uye kugadzira "mhinduro matekinoroji" eiyo indasitiri, zvakare kuva shamwari inovaka yezviremera zvehurumende, ”anodaro Natalya Ivanova, General Director weASPP.
"Tinodawo kuwedzera huwandu hwenhengo dzedu kuti tikwanise kuunganidza nekuparadzira nzira dzakanakisa dzechikafu."
Tags: Mcdonaldskutsanya chikafu maresitorendi
Munyu kana kugwamba?